ONN:Hiriira Mormii Motummaa TPLF Irratti Hawaasa Oromo , Amaaraa fi Ogaadeeniin magaalaa – Kichuu
HomeAfaan OromooTVONN:Hiriira Mormii Motummaa TPLF Irratti Hawaasa Oromo , Amaaraa fi Ogaadeeniin magaalaa
ONN:Hiriira Mormii Motummaa TPLF Irratti Hawaasa Oromo , Amaaraa fi Ogaadeeniin magaalaa Torontootti BIT-29/2018 raawwatamee ture,BITO-30/2018
Namoota “gammachuu ibsachuuf hiriira bayan” hidhuun sirrii dha!
Maaltu geeddaramnaan gammadan? Namni gammadu yoo jiraate Wayyaanee qofa. Qaroomaan nucaalanii karaa ittiin nu fixan argatan. Oromo kan gammaduu qabu gaafa wayyaaneen oromia dhiiftee baate qofa. Hammanati oromian akka dhibeen kaanserii qabeeti. Yoo jiraachuu feene kaanseriin kun hundeedhaan buqqa’uu qaba.